Ukubuyekezwa kweBlink XT2 (2020) - Ikhamera Engaphandle Engenantambo? - Amagajethi
Esikhathini esithile esidlule, ukuthola amakhamera ezokuphepha anolwazi olunzulu kwakuyiphupho lomuntu ojwayelekile. Kodwa-ke, ukufika kwamakhamera we-Blink kwenze ukuthi noma ngubani akwazi ukuthenga ikhamera yezokuphepha engcono.
Amakhamera okuphepha e-Blink XT aziwa ngokutholakala kwawo okuphezulu. Zisebenziseka kalula kunoma yimuphi umuntu, ngisho nabantu abangaphansi kobuchwepheshe. Lawa makhamera anokuhambisana okuhle nesitoreji samafu ukonga utshalomali kumthamo wokugcina owengeziwe. Ukuhlanganiswa kwalezi zici kwenze kwaba yinto evamile kubantu.
Manje, i-Amazon ingumnikazi we-blink, futhi ikhiphe enye ikhamera yokuphepha elungele isabelomali enekhono le-HD, iBlink XT2. Uma ufuna ukuthenga ikhamera yezokuphepha ekhaya, le ndatshana ikulethela isibuyekezo esigcwele esinolwazi oluwusizo. Ngakho-ke, uzokwazi ukwenza isinqumo esifanele.
Izici ze-Blink XT2:
Akungabazeki ukuthi iBlink XT2 iyayekethisa ezintweni ezahlukahlukene ukukulethela ikhamera yezokuphepha eqondile. Ikulethela okuphakelayo kwevidiyo engu-1080P ngokususa ezinye izinto noma izingxenye zayo ukuze ikwenze kube ukukhetha okunesabelomali. Kodwa-ke, kusekhona izinto eziningi eziphoqayo ezinikezwa ngamakhamera. Ake sibheke kubo:
Ukufakwa okulula:Kuzothatha ubuningi bemizuzu engama-20 ukuxhuma i-XT2 namadivayisi akho. Okokuqala, kufanele uxhume imodyuli yokuvumelanisa ku-Wifi bese kuba ikhamera yesigaba sokuvumelanisa. Idivayisi yokukhweza ilula kakhulu. Ukuyisebenzisa nge-smartphone yakho noma amanye amadivayisi, okumele ukwenze nje ukusika ikhodi ye-QR ngokushelelayo.
Okuphakelayo Kwevidiyo ye-HD:Ikhamera inikeza ukukhishwa kwe-1080P okungalokothi kuphuthelwe noma imiphi imininingwane futhi yenza umsebenzi omuhle kulokho. Uthola i-engeli engu-110-degree yokubuka okungahle kube ngaphansi kancane kwamanye amakhamera kepha kusadingeka izindleko nokutshalwa kwemali ngekhwalithi yevidiyo.
Ukutholwa Kokunyakaza:Ungahle ucabange ukuthi kungahle kube nokushoda kwezici zekhamera engabizi kangako. Kodwa-ke, kuza nokutholwa kokunyakaza okwanele. Awukwazi ukuthola umuntu, kodwa ngokungangabazeki ungasetha ukuzwela kokunyakaza. Kuyasiza uma kunemimoya ephezulu, futhi awufuni ukuthola isaziso esicasulayo somsebenzi.
Umbono Wasebusuku:Kukhona ukuhlanganiswa kombono ebusuku 'okusebenzayo'. Isebenzisa izinzwa ze-infrared kumthamo wokubuka ebusuku. Ngokuqinisekile akuyona into ehlaba umxhwele kakhulu yeBlink XT2. Kodwa-ke, ukuba nombono ebusuku ebangeni elithengekayo njalo kuzoba iphuzu lokuhlanganisa.
I-Two-Way Audio:Ikhamera iza nomsindo wezindlela ezimbili ukufeza izidingo zakho zokuxhumana. Isekelwa ikhwalithi ye-Amazon, isebenza kahle. Ngokuvikela kahle isimo sezulu, iyakwazi ukwenza kahle ngisho nasesikhathini semvula.
Izindawo Zobumfihlo:Enye futhi into eguqukayo ekuvumela ukuthi ukhethe indawo yokuqapha. Ngamazwi alula, ngendawo yobumfihlo, unganquma ukuthi ikhamera kufanele igxile kuphi noma imboze indawo engakanani. Uma uyifaka endaweni engadingi ukubuka okubanzi kwe-angular, kuyisici esikahle.
Ukuhambisana kwe-Alexa:Njengomkhiqizo we-Amazon, iBlink XT2 inokuhambisana ne-Alexa. Ngakho-ke, ungayixhuma ngisho nohlelo lwakho lwasekhaya uma une-Echo. Ngaphezu kwalokho, ungabuka okuphakelayo okubukhoma ku-FireStick TV nakwamanye amadivayisi asekelwa yi-Amazon. Ngokuqinisekile kuyisengezo esihle kakhulu ohlelweni oluphelele lwezokuphepha.
Uhlelo lokusebenza lwe-Blink Home:Mhlawumbe okungcono kakhulu okunikezwa yiBlink XT2 uhlelo lokusebenza. Inokuguquguquka okumangazayo futhi ikwenza ukwazi ukwenza ngezifiso ikhamera nokuphakelayo kwayo ngokuya ngokuthanda kwakho. Ungaxhuma amakhamera amaningi ngayo.
Ukubuyekezwa kwe-Blink XT2 - Lokho Isazi Esikushoyo Ngayo?
IBlink XT2 inikeza okuphakelayo okubukhoma okungu-1080P HD ngesitoreji samafu ukugcina okuqoshiwe kuze kube ngamahora amabili, mahhala. Ifaka isistimu yomsindo yezindlela ezimbili eyenza ukwazi ukukhuluma nanoma ngubani oseduze kwekhamera. Ngakho-ke, kusebenza kahle ngokuphepha emnyango noma ukwethusa noma ngubani ongena ngaphakathi.
I-Amazon ibilokhu itshalile ekuhlinzekeni uhlelo lwekhamera lwezokuphepha ekhaya oluguquguqukayo lwabantu. Lapha unekhamera engenantambo esebenza kuma-AA lithium battery. Kunamabhethri amabili, futhi ithi idonsa kuze kube yiminyaka emibili ngaphandle kokuvuselelwa kabusha okudingekayo.
Yini eyenza ilungele ukusetshenziswa kwangaphandle? Inesilinganiso sokungenwa ngamanzi se-IP65, okwenza ukuthi ifane nanoma iyiphi enye ikhamera ejwayelekile yangaphandle. Umzimba wekhamera ugcwele uvalwe ukuvimbela uthuli ekuthikanyezeni izingxenye zalo. Ngaphezu kwalokho, ingakwazi ukusinda emazingeni okushisa azungeze -4 kuye kuma-113 degrees, okwenza ikwazi ukuhambisana nesimo sezulu esijwayelekile.
Esikhundleni samakhamera ajikelezayo ajwayelekile, unohlelo lwesikwele olubukeka lushelele futhi lunobukhulu obungu-3.4 x 7.11 x 7.11 cm. Inesisindo esingaphezudlwana kuka-86 amagremu. Ngakho-ke, ayidingi i-bolting eqinile, futhi nangaphansi okuyisicaba, ungayihlanganisa noma yikuphi. Kusuka ngaphandle kuye ngaphakathi, ngisho nasematafuleni nasemashalofini, kuzosebenza kahle. Idizayini ebushelelezi ngokungangabazeki iyamangaza.
Kodwa-ke, udinga iModyuli Yokuvumelanisa 2 ukuxhuma ikhamera kunoma iyiphi idivayisi ne-Wifi. I-Sync Module 2 uhlelo oluhlukile 'lwasekhaya isixhumanisi' samakhamera we-Blink. Ivumela ukuxhumeka kuze kufike kumakhamera ayi-10, okwenza kube wukutshalwa kwemali okufanele.
Uma ufuna ukutshala imali kancane kancane kumakhamera akho okuphepha ekhaya futhi wandise inani lawo, kungukukhetha okungenzeka. Okubaluleke kakhulu, i-Sync Module 2 icwecwe njengeBlink XT2. Ngaphandle kwesitoreji sefu, ungaba nesitoreji sendawo ku-Sync Module 2 bese usithuthukisa ngememori khadi.
Ingabe iBlink XT2 Inombono Wasebusuku?
Yebo, ikhamera inombono ebusuku. Kodwa-ke, akuwona umbono oqondile noma ocacile wasebusuku. Izokwenza umsebenzi wekhamera yokubuka ebusuku yenziwe, kepha imnyama futhi imhlophe. Ngeke ube nezithombe ezicacile. Ngakho-ke, uma ufuna ukuthi isebenze kahle ebusuku, ungahle udinge izindawo ezikhanyiswe kahle.
Ake sibheke masishane kuzo zonke izinzuzo nezingozi zeBlink XT2 ukukusiza ngesinqumo sokugcina.
Ukukhetha okungabizi kakhulu
Okuphakelayo okubukhoma kwe-HD 1080P ngombono we-engeli engu-110
Inzwa yokunyakaza nombono wasebusuku
Isebenza ne-Blink Home App
Ihambisana ne-Alexa ne-smart home
Ukusetshenziswa kwangaphandle nangaphandle (isilinganiso se-IP65)
Kufika emahoreni amabili wesitoreji samahhala samafu
I-Wifi nedizayini engenantambo
Impilo yebhethri ebanzi
Kudinga ukuvumelanisa i-Module 2 ukuze isebenze
Akuxhumi ngqo namanye amadivayisi
UMount akanazo izici zokulwa nokucekelwa phansi kwempahla
Kudinga ukuthi ufake endaweni ephephile
Ukusebenza okungaboni kahle ebusuku
Imizuzwana engama-30 kuya kwemizuzu emi-5 yokuphakelwa kwevidiyo ngasikhathi
Ayilungele isimo sezulu esishisa ngokweqile
1Q. Ingabe Okuphakelayo Okubukhoma Kuhlala Isikhathi Eside Kangakanani?
Iminyaka:Ikhamera yokuphepha ye-Blink XT2 ayinikezi okuphakelayo okubukhoma okungaguquguquki. Inikeza ngemizuzwana engama-30 yokuphakelayo okubukhoma, ngemuva kwalokho kuzofanele uchofoze inketho ethi 'qhubeka' ukuqhubeka nokuthola okuphakelayo. Noma kunjalo, uzovuka kuze kube yimizuzu emi-5 yokuphakelwa kwamavidiyo ngokusemandleni akho.
2Q. Yini Oyitholayo Ebhokisini le-Blink XT2?
Iminyaka:Iphakheji ngayinye iza nekhamera eyodwa ye-Blink XT2 enemodyuli ekhuphukayo. Uthola i-Sync Module 2, ikhebula le-USB, i-adaptha yamandla, amabhethri amane we-AA esikhundleni samabili, namathuluzi ekhamera. Ngamazwi alula, iphakethe olimbozile kusuka kuzo zonke izingxenye.
3Q. Injani i-The Two-Way Audio?
Iminyaka:Ikhwalithi yomsindo inakekelwa kahle futhi ipholile. Ngakho-ke, awuzizwa uhlanekezelwe. Izingxenye azishibhile. Ngakho-ke, uthola ukucaciseleka okuhle kakhulu ngale ntengo. Ukulalelwayo kwezindlela ezimbili sekuyinto ebaluleke kakhulu kumakhamera wanamuhla, ikakhulukazi ukukhuluma nezivakashi, ukulethwa kwabafana, noma ukwethusa abangena. Kulezi zici, i-Blink XT2 yomsindo wezindlela ezimbili yanele.
4Q. Ingabe Ikhona Indlela Yokubheka Izinga Lokushisa?
Iminyaka:Ikhamera iza ne-thermometer eyakhelwe ngaphakathi esebenza ngokuvumelanisa nohlelo lokusebenza. Ngakho-ke, kuzoqala ukukwazisa uma izinga lokushisa lingezansi noma ngaphezulu kwamazinga owasethile kuhlelo lokusebenza. Kuyasiza futhi kungavikela amakhamera akho emazingeni okushisa angasebenzi kahle kuwo.
Isinqumo - Ingabe Sikufanele Ukuthenga?
IBlink XT2 uhlelo lwekhamera olubiza kakhulu uma uhlela ukukhulisa amayunithi wekhamera ngokuhamba kwesikhathi. Ungathola ukuphepha okwazi kahle indlu yakho. Ngamanani, iletha ukusebenza okugculisayo kungekho lutho olungakhala ngakho. Kodwa-ke, umbono wasebusuku ngokuqinisekile uthatha ukunyuka.
Ngokuxhumeka kwejubane lakamuva nokuguquguquka okungenantambo, kuzowenza umsebenzi wenziwe. Kufanele uqaphele ukuthi ungayifaka kuphi, noma kunjalo. Njengoba ingenazo izindlela zokuphazamisa, cishe noma ngubani angayisusa noma ayintshontshe.
Kukonke, kungukutshalwa kwezimali okuhlangene kakhulu futhi okuseqophelweni futhi kudinga yonke imali. Kuyisinqumo esihle kakhulu kunoma ngubani ofuna amakhamera ezokuphepha angena ezingeni lokungena ukuze abe uhlelo oluqinile lokuqapha.
kungani hulu lungasebenzi
Xbox khulula 1 amakhodi bukhoma
ungawathola kanjani ama-id omculo we-roblox
ukusakazwa kwama-movie wamahhala nemidlalo ye-tv
amakhodi wesipho we-amazon awukho ucwaningo